Como Tirar Manchas Escuras Nas Pernas Por Má Circulação, ‪#‎Circulaçãodosangue‬
Ahoana ny fomba fanesorana ireo teboka maizina amin"ny tongotra noho ny tsy fivezivezena
Ho hitanao açao amin"ity lahatsoratra ity izany Ahoana ny fomba fanesorana ireo teboka maizina amin"ny tongotra noho ny tsy fivezivezena, ao amin"ny torolàlana feno.
Você está assistindo: Como tirar manchas escuras nas pernas por má circulação
Matetika ny hoditra ao amin"ny faritry ny tratra encontro maizina na manala baraka noho ny antony maro, fa ny tena lehibe matetika encontro ny hoe "miafina" foana ny faritra ao ambanin"ny lambantsika.
Ity olana estetika ity encontro mety hisy fiantraikany amin"ny fahatokisan-tena ny vehivavy amin"ny fahavaratra sy amin"ny moron-dranomasina, ary koa amin"ny fotoana rehetra amin"ny taona amin"ny fotoana akaiky. Ny tasy encontro mety vokatry ny karazana fanesorana volo na ny lamba fanazaran-tsika ampiasaina.
Raha vantany vao hita ny toe-javatra ary tadiavinao ny mamadika azy dia mila manomboka mampihatra menaka fanosotra, sarontava na menaka fanosotra ianao. Na izany aza, tsy ilaina ny mankany amin"ireo magazay sy mividy vokatra lafo be. Ny fangaro ilaina ao anaty vata fampangatsiahana sy pantry!
Ny teboka maizimaizina sy ny mony ary ny mony no tsy tadiavina enquanto tena ratsy indrindra, saingy misy ny fomba manamaivana ireo toerana ireo.
Ireto misy fanafody an-trano sasantsasany izay hita ~ por an-dakozia mba hanadiovana ireo toerana maizina vir anatin"ny roa herinandro na iray volana fotsiny.
Ny teboka maizimaizina sy ny mony ary ny mony durante tsy tadiavina enquanto tena ratsy indrindra, saingy misy ny fomba manamaivana ireo toerana ireo.
Ireto misy fanafody an-trano sasantsasany izay hita aos an-dakozia mba hanadiovana ireo toerana maizina vir anatin"ny roa herinandro na iray volana fotsiny.
Jereo ny torolàlana eto ambany Ahoana ny fomba fanesorana ireo teboka maizina amin"ny tongotra noho ny tsy fivezivezena;
Angamba tsy fantatry ny olona fa manavy ny maizina ny ovy. Fomba iray ampiasana ovy ny fanapahana ovy ary apetaka eo ambonin"ireo toerana maizina.Avelao mandritra ny minitra vitsy alohan"ny hanasana ny tavanao amin"ny rano mafana.
Ny ovy data azo ampifangaroina amin"ny tantely ihany mba hampiasaina ho sarontava tarehy.
Ovy Tantely uma sotrokely
Afangaro ny ovy ary afangaro ny tantely. Ampiharo amin"ny faritra maizina ny tasy ary avelao mandritra ny 15 minitra. Sasao amin"ny rano ilay faritra voadona.
Manala ny teboka mainty ny Whey ary afaka manao izany nefa tsy miteraka fahamaizana mahery vaika.
Dibera 4 sotrokely Ranona voatabia 2 sotrokely
Afangaroy ny dibera sy ny ranona voatabia. Ahosotra amin"ny hoditra. Avelao hijoro eo amin"ireo toerana maizimaizina mandritra ny 15 minitra alohan"ny hanasana ireo faritra ireo.
Ny ranom-boasarimakirana encontro singa iray mahazatra izay afaka mamaha ny fanahianao rehetra ~ por anatin"ny tapa-bolana.
Araraka ny baolina landihazo ary kosohy eo amin"ilay toerana maizina mandritra ny minitra vitsy.
Ny voasarimakirana encontro azo ampiarahina amin"ny yaourt na menaka eran"ny sotrokely ihany koa handanjalanjana ny lokon"ny hoditra.
Ity encontro sakafo maraina no decorrer tsiro hanana hoditra tonga lafatra.
Totoina oaka antsasaky ny kaopy mihodina ary ampio ranom-boasarimakirana 1-2 sotrokely mba hamoronana paty. Atsofohy amin"ny hoditrao ity paty ity. Avelao mandritra ny 15 minitra ary sasao amin"ny rano mafana.
Tokony hampitandrina anao aho fa ity sarontava ity data mety ho sarotra ampiharina sy hadio.Araho indray mandeha na indroa isan-kerinandro io fitsaboana io.
Ny fampiasana ronono amin"ny vatanao data afaka mampihena ny pigmentation-n"ny hoditra rehefa mandeha ny fotoana ary mampamirapiratra azy hatrany.
Atsofohy fotsiny ny baoty landihazo amin"ny ronono ary esory moramora amin"ny hoditra mandritra ny 10 minitra. Tohizo ity fanazaran-tena ity indroa isan"andro mandritra ny efa-bolana.
Ny ronono encontro azo adino miaraka amin"ny tantely ihany koa, hanamafisana kokoa ny fanesorana ireo teboka maizina.Raha manapa-kevitra ny hampiasa an"io fanafody io ianao encontro avelao mandritra ny 10 minitra.
Ity gelatin mangatsiaka ity dia mety hahatonga anao hahatsapa ho sadaikatra, fa tsy ny fahatapahana amin"ny hoditrao ihany no sitrana.
Ranom-boaloboka na gel
Arosoy moramora amin"ny alàlan"ny rantsan-tananao ny gelatin aloe vera. Ataovy ny fitsaboana an"ity trano ity hatramin"ny indroa isan"andro ary ho hitanao ny fandrosoana vir anatin"ny herinandro vitsivitsy.
Raha mikorontana data ampiasao lamba madio atsoboka anaty rano mafana hanalana ilay sarontava.Araho indray mandeha na indroa isan-kerinandro io fitsaboana io.
Ny menaka vitamina E sy menaka castor encontro ilaina ihany koa amin"ny fanesorana ireo teboka mainty.
7. Vovo-tany turmerika
Turmeric dia loharanom-pahalalana tsy mampino tokoa hanazavana ny toerana maizina.Tsy toy ny fanafody an-trano hafa, ny turmerika dia tsy maintsy atambatra amin"ny loharano hafa.Manantena valiny haingana vir anatin"ny roa herinandro, raha ampiasaina isan"andro.Ity ny fomba voalohany hanandramana
Vovon-kazo turky one sotrokely Ronono 1-2 sotrokely Ranom-boasarimakirana uma sotrokely
Afangaro ireo akora telo ireo mba hamoronana pika tsy matevina loatra, nefa koa tsy be ranoka. Avela 20 minitra ity alohan"ny hitomboan"ny rano.
Ny fanasana sasantsasany encontro mety ilaina mba hanesorana tanteraka ny sisa amin"ireo teboka maizina, toy ny hoe teo amin"ny tarehy ireo.Ataovy isan"andro io fanazaran-tena io mandritra ny tapa-bolana encontro hahita fahasamihafana lehibe ianao amin"ny fotoana fohy.
Raha tsy misy ronono na ranona voasarimakirana aos an-dakozia ianao encontro azonao soloina menaka oliva sy tantely koa.Mamy ny tantely, nefa manamaivana ny ratra.
8. Vovoka curcuma (Fizarana 2)
Vovon-kazo turky uma sotrokely Tantely 1-2 sotrokely Menaka 1 sotrokely
Afangaro ireto akora telo ireto ary araho ny fomba mitovy.
Ny papaya data misy anzima antsoina hoe papain, izay afaka mandanjalanja ny lokon"ny hoditra ary mamoaka ny hoditra.Izy io encontro mihetsika toy ny fikosohan-tsainao, izay ampiasain"ny olona maro amin"ny kiho sy ny lohaliny.Ampiasao ny papay pulp ary apetaho amin"ireo faritra voadona.Avelao hihazakazaka mandritra ny 20 minitra ny majikao alohan"ny hanasana azy.
Ny vahaolana an-trano hafa hanandramana ny papay dia ny fampifangaroana azy amin"ny ranom-boasarimakirana.
Papay maintso 1 Ranom-boasarimakirana 1 sotrokely
Voalohany, totoina ny papaya maintso ary ampio ranom-boasarimakirana 1 sotro. Aorian"ny fifangaroana tsara encontro apetaho amin"ny hoditra. Avelao hihetsika mandritra ny 15 minitra ary kobanina amin"ny rano.
10. Cube siramamy
Mampiasà cubes siramamy hanosehana maivana ireo teboka mainty isan"andro.
Ny cubes siramamy data fomba iray tsara hanamorana ny tasy amin"ny vatana.
Ver mais: Como Saber Se Minha Imunidade Está Boa, Imunidade: Como Saber Se Estamos Com O Organismo
Mampitomany anao ny tongolo, fa mitsabo tsara ny hoditrao izy ireo mba hampihenana ny teboka mainty.
Arosoy mivantana ireo faritra voakasika, in-droa na intelo isan"andro, ny tongolo.